Dhamaan wararka ku saabsan cusbooneysiinta 1.5 ee Mobile PUBG ayaa keena | Androidsis
Dhamaan wararka PUBG Mobile cusbooneysiiya 1.5 ayaa keena
Haaruun Rivas | 10/07/2021 11:39 | La cusbooneysiiyay 10/07/2021 11:41 | Noticias, PUBG Mobile
Mid baa jira cusbooneysiin cusub oo PUBG Mobile ah, waana 1.5. Midkani wuxuu la yimaadaa dhowr isbeddel oo xiiso leh, warar iyo horumarin, sida dhimista muddada baaska dagaalka iyo qiimaha isku midka ah, hubka cusub, qaababka iyo shaqooyinka, iyo in ka badan. Waxaan ku sii qeexaneynaa qoraalada balastarka.
Waxaa jira waxyaabo badan oo cusub oo la arko, laakiin hoosta waxaan ku soo koobaynaa kuwa ugu muhiimsan. Sidoo kale, maskaxda ku hay taas cusbooneysiinta ayaa hadda laga heli karaa Play Store, sidaas darteed waxaad hadda isku dayi kartaa dhammaan wararka ku jira ciyaarta.
1 Hababka cusub
1.1 Dareenka howlgalka
1.1.1 Isbadal dhameystiran
1.1.2 Nidaamyada Ciyaaraha Gaarka ah ee Hawlgalka
1.1.3 Qoryaha Gaarka ah ee Aqoonsiga Qoryaha iyo agabyada kale
1.1.4 Gawaarida Gawaarida Gaarka ah ee Cusub
1.1.5 Waxyaabaha Gaarka ah ee Aqoonsiga Howlgalka
1.1.6 Astaamaha gaarka ah ee Aqoonsiga Ergada
1.1.7 Waxyaabaha kale ee cusub ee ka socda Hawlgalka Aqoonsiga
2 Tesla (Luulyo 9-Sebtember 6)
2.0.2 Model Y iyo wadista baabuurta iswada
3 Qoryo cusub iyo hagaajinta dagaalka
3.1 Qoryaha cusub ee MG3
3.2 Isku hagaajinta M249
3.3 Khidmadda nidaamka magdhawga dabka
3.4 Qofka saddexaad ee dejinta aragtida kamaradda
3.5 Daaqadaha muraayadda cusub
3.6 Hagaajinta caqliga xakamaynta asalka ah
3.7 Kooxda Dhimashada: Hangar Hagaajinta
3.8 Ku hagaajinta EvoGround - Payload 2.0
3.9 Gawaarida degdega ah ee cusub
3.10 Alaab cusub oo la isticmaali karo
3.11 Taalada Guusha Cusub
3.12 Sawirro kooban oo Guul ah
3.13 Tilmaamaha ammo ee haray cusub
3.14 Shaashadda xogta ku celiska dhimashada cusub
3.15 Dejinta Qoryaha Qaaska ah
3.16 Qalabaynta khaaska ah ee hubka
3.17 Ogeysiisyada kaqeybgalka ee asxaabta cusub
4 Gudub dagaal
6 Ray waa halkan!
7 Guullo cusub
8 Hadiyad RP
9 Horumarinta waxqabadka aasaasiga ah
10 Hagaajinta aagga amniga
11 Kordhinta amniga
12 Kordhinta horyaalnimada dhammaan awoodaha
13 Kordhinta muuqaalka
14 Hagaajinta nidaamka
15 Wareegga 1 Xilliga 1
15.1 Nidaamka dhibcaha
16 Hagaajinta astaanta heerka
17 Cusbooneysiinta shaashadda xilliyeed
18 Horumarinta abaalmarinta xilliyeed
Waxaa la heli doonaa laga bilaabo Luulyo 9 ilaa Sebtember 6. Marka la eego arrintan, shirkadda tamarta iyo teknoolojiyadda ee DynaHex waxay ku socotaa "isbeddellada teknolojiyadda muddada-dheer" ee Erangel
DynaHex waxay bedeshay lix meelood oo waaweyn oo Erangel ah oo ku saleysan difaaca militariga, ka faa'iideysiga tamarta, gaadiidka iyo saadka, iyo cilmi baarista cilmiga ah.
Xarunta Transit (horey loo oran jiray Pochinki)
Pochinki waa udub dhexaadka shabakada gaadiidka Erangel oo hada noqotay xudunta transit jasiiradda.
Dekedda Georgopol (hore loo oran jiray Georgopol)
Faa'iidooyinka Georgopol ee dekedda saadka ayaa laga faa'iideysan doonaa iyadoo la hirgelinayo xarun taliska dhexe oo cusub iyo bakhaar si otomaatig ah u shaqeynaya.
Xarunta Tech (oo ahaan jirtay Iskuulka)
Aaggan hore ee dugsigu hadda wuxuu xoogga saarayaa dhimista weydiinta tacliinta iyo sahaminta.
Xarunta Amniga (oo horey u ahaan jirtay Saldhiga Milatari)
Saldhigga Milateri wuxuu mas'uul ka yahay la socodka amniga jasiiradda oo dhan iyo bixinta taageero hubaysan.
Wakaalada Saadka (horey Yasnaya Polyana)
Wakaaladda Saadka waxay ku taal Yasnaya Polyana waana xarun weyn oo loo qaybiyo sahayda timaada Erangel.
Xarunta Tamarta (oo horay loo oran jiray Mylta Power)
Ururkani wuxuu awood u leeyahay dhammaan Erangel wuxuuna isku daraa soosaarka korantada caadiga ah iyo tikniyoolajiyad casri ah si uu u soo saaro sahay deggan oo loogu talagalay dhismayaasha madaniga iyo kuwa jasiiradda.
Nidaamyada Ciyaaraha Gaarka ah ee Hawlgalka
Wiishka, albaabada otomaatiga ah iyo aaladaha kale ee dhaqaaqa ayaa ka soo muuqan doona aagagga magaalooyinka ee la hagaajiyay.
Si safarka looga dhigo mid wax ku ool ah Erangel, Wakaaladda Saadka ayaa Erangel ka hirgelisay HyperLines si ay isugu xirto magaalooyinka kala duwan ee jasiiradda.
Xarunta Taliska ayaa ku rakibtay qalabkan gaarka ah ee gaadiidka meel ka baxsan magaalooyinka iyo xarumaha si ay uga caawiso shaqaalaha amniga inay ku safraan hawada isla markaana ay sameeyaan roondooyin cirka ah
Qoryaha Gaarka ah ee Aqoonsiga Qoryaha iyo agabyada kale
Qoryaha cusub: ASM Abakan
ASM Abakan wuxuu shidaa 5,56mm wareeg wuxuuna leeyahay sedex nooc oo xabadaha lagu rido: otomaatig buuxa, laba-toogasho qarxis ah, iyo hal xabad.
Lifaaqyada xajintu waxay si weyn u wanaajin karaan wax ka qabashada hubka, waxay xoojin karaan xakamaynta qafiska toosan / toosan, iyo dib u soo kabashada xawaaraha.
Ku xirnaanta muuska waxay si wax ku ool ah u yareyn kartaa kala-daadashada rasaasta iyo xakamaynta xakamaynta.
Qalabka majaladda waxaa lagu dhejin karaa dhammaan qoryaha waxayna si weyn u kordhineysaa awoodda joornaalka iyada oo lagu qiimeynayo waqti waxoogaa ka yar dib loo cusbooneysiiyo.
Gawaarida Gawaarida Gaarka ah ee Cusub
Baaskiil amphibious antigravity wuxuu leeyahay kuraasta 2 waxaana loo isticmaali karaa in si raaxo leh loogu dhex maro khariidada oo dhan.
Waxyaabaha Gaarka ah ee Aqoonsiga Howlgalka
Qalabka sixitaanka taatikada
Maqaalkani wuxuu horumariyaa tikniyoolajiyadda ciyaaraha. Markii la qalabeeyo, waxay si otomaatig ah u calaamadeyneysaa booska cadaawayaasha la garaacay waxayna sidoo kale muujineysaa xaaladda asxaabta ku jirta minimap markay ka qeyb galayaan.
Taabo si aad u dhigto gaashaan rabshad waara oo xannibi kara dhammaan rasaasta.
Astaamaha gaarka ah ee Aqoonsiga Ergada
Bandhigga Holographic ee Jasiiradda Spawn
Shaashad holograafiya ayaa lagu soo bandhigay Jasiiradda 'Spawn Island', taas oo muujinaysa khariiddada iyo waddada duulimaadka ee ciyaarta hadda socota, iyo sidoo kale calaamadaha ay sameeyeen ciyaartoydu.
Inta lagu jiro wejiyada duulimaadka iyo boodboodka, ciyaartoydu si toos ah ayey u taaban karaan khariidada si ay u dhigaan astaamo.
Ciyaartoydu waxay awood u yeelan doonaan inay si otomaatig ah baarashuudka uga baaraandegaan goobta calaamadeysan ka dib marka muuqaalka la awood siiyo.
Waxyaabaha kale ee cusub ee ka socda Hawlgalka Aqoonsiga
Animations duulimaad lagu daray gantaalada kahor inta aysan ku qarxin weerarada cirka si ay ugu fududaato xukumida halka ay ku qarxi doonaan.
Lagu daray muuqaal tilmaame ah oo tilmaamaya meesha ugu dhow ee bambaanooyinka gacanta laga tuuro oo ku dhow inuu ku qarxo ciyaartoyda agteeda.
Tesla (Luulyo 9-Sebtember 6)
Dhacdada toos u socon doonta laga bilaabo Julaay 9 ilaa Sebtember 6.
Mashruuca 'Tesla Gigafactory' ayaa ka soo muuqan doona khariidada. Ku rog dhammaan furayaasha khadadka isku-xidhka ee warshadda si aad u bilowdo hawsha isku-dubbaridka gaadhiga iyo dhisida gaadhi Tesla ah - Model Y.
Model Y iyo wadista baabuurta iswada
Gawaarida iswada ee laga soo saaro Tesla Gigafactory waxay leeyihiin qaab autopilot ah oo laga hawlgelin karo wadooyinka khariidada si toos ah ciyaartoy loogu geeyo meesha ay ku yaalliin calaamadaha hore ee wadada.
Gawaaridaan gawaarida iswada ee loo yaqaan 'Tesla-Gaadiidka iswada leh ayaa si kadis ah uga muuqan doona wadada duurka waxayna si toos ah ugu socon doonaan wadooyin gaar ah.
Soo hel Sahayda Dagaalka adoo wax ka qabanaya burburka Semi-ka si aad u daadiso Sanduuqyada Bixinta.
Qoryo cusub iyo hagaajinta dagaalka
Qoryaha cusub ee MG3
Qoriga fudud ee MG3: Wareegyada 7,62mm, hubkani wuxuu ka kooban yahay hal hab oo toogasho ah, xaddigiisa dabka si dabacsan ayaa loogu beddeli karaa 660 ama 990 wareeg daqiiqaddii, taas oo u oggolaanaysa xabad joogto ah iyo buufin degdeg ah
Markii loo isticmaalo bipod-ka, dib-u-soo-celinteeda si weyn ayaa loo yareeyaa iyadoo toogashada u nugul tahay. Qorigaan wuxuu ku dhashaa oo kaliya Air Drop.
Isku hagaajinta M249
Hadda MG3 waxaa lagu daray airdrops, M249 ayaa laga saari doonaa hawada waxayna ka muuqan doontaa dhulka guud ahaan khariidada qaabka caadiga ah.
Khidmadda nidaamka magdhawga dabka
Waxaa lagu daray nidaam mideysan oo loogu tala galay hubka noocyadiisa kala duwan si loo xaliyo dhibaatada sicirka rasaasta ee aan iswaafaqsaneyn marka heerka jirku ka duwan yahay.
Qofka saddexaad ee dejinta aragtida kamaradda
Waxaa lagu daray ikhtiyaar lagu hagaajiyo aragtida TPP.
Goobta aragtida ee TPP waxaa lagu hagaajin karaa dejinta.
Doorashadan laguma dabaqi doono aaladaha qaarkood oo leh shaashad durba leh aragti ballaadhan.
Daaqadaha muraayadda cusub
Muraayadda ayaa lagu daray dhismayaasha qaar ee Erangel iyo Miramar.
Muraayadda waxaa lagu jebin karaa weerarada melee, toogashada, ama daaqadaha iyadoo la fuulayo, waxayna sameyn doontaa buuq markii la jajabiyo, laakiin dib uma soo celin doonto markii la jajabiyo.
Hagaajinta caqliga xakamaynta asalka ah
Qaadista otomaatigga ah way shaqeyn doontaa marka dabeecaddu ay isticmaaleyso daawo.
Haddii hubka melee la soo qaado markii dabeecaddu horey u haysatay hub aasaasi ah, hubka melee waxaa lagu keydin doonaa si aan caadi aheyn.
Markuu qof jilaa uusan haysan Rooti, ​​dabeecadda ayaa si otomaatig ah u ururinaysa una qalabeyn doonta Roodhi.
Haddii rasaasta qorigu dhammaatay (oo ay ku jiraan rasaasta dheeri ah) oo uu jiro hub kale oo weli leh ammo, dabeecadda ayaa si otomaatig ah ugu beddelaysa adeegsiga hubkan.
Qoryaha ololka leh ee aan ammo lahayn si toos ah uma qaadi doono.
Kooxda Dhimashada: Hangar Hagaajinta
Caynsanaanta ku dhow barta ay ku dhasheen daarta ayaa la hagaajiyay si ay ugu dhowaad ugu sarreyso sida sare ee istaagga midhaha.
La hagaajiyay xajmiga minimap-ka si loo fududeeyo la socodka xaaladda dagaalka.
Ku hagaajinta EvoGround - Payload 2.0
Tencent ayaa sheegtay inay sii hagaajin doonto EvoGround - Payload 2.0 si ay uga sii fiicnaato sidii hore qof walba.
Gawaarida degdega ah ee cusub
Giraangiraha walxaha gabi ahaan la isticmaali karo iyo kuwa la tuuri karo ayaa lagu daray si loo fududeeyo isticmaalka waxyaabaha la isticmaali karo / la tuuri karo.
Muuji aaladda alaabada wax lagu cuno / tuuro si aad u furto shaagagga una bedesho ama u isticmaasho waxyaabaha.
Waxaad awood u siin kartaa hawsha tuurista deg-degga ah ee menu-yada. Ka dib markaad awood u yeelatid, riix oo hayso astaanta la tuuri karo si aad u isticmaasho Quick Trow.
Waxaad awood u siin kartaa hawsha tuurista degdegga ah ee 'Wheel Trow' tuurista menu-ga. Ka dib markaad awood u yeelatid, giringirinta giraangirta oo si deg deg ah u xulo bartilmaameedka la tuuri karo si aad u sameysid Dhakhso Deg Deg ah
Alaab cusub oo la isticmaali karo
Ciyaartoydu way tuuri karaan dawooyinka ay wataan dhibic-madhan qaab baakado ah. Daawooyinka la tuuray waa la qaadi karaa.
Taalada Guusha Cusub
Ka dib guusha, waxaad u yeeri kartaa taallo si loogu dabaaldego.
MVP ee kooxda guuleysata waxay ugu yeeri karaan taallo guusha meel cayiman.
Cunnooyinka Dabaaldegga Gaarka ah ayaa lagu isticmaali karaa agagaarka Taalada Guusha.
Sawirro kooban oo Guul ah
Ka dib markaad ku guuleysato qaabka caadiga ah, waxaad geli kartaa Sawirka Sawirka.
Waad dooran kartaa inaad qariso ama tusto macluumaadka asxaabtaada qaabka Sawirka.
Waad wadaagi kartaa sawiradaada kadib markaad qaadatid.
Tilmaamaha ammo ee haray cusub
Mar kasta oo joornaalku ku dhowaad madhan yahay, lambarka tilmaamaya ammo harsan ayaa midab beddeli doona:
Marka ay kuu harsan tahay 25% ammo, lambarku wuxuu isu beddelayaa huruud.
Markaad ka harto 10 boqolkiiba ammo, lambarku wuxuu isu beddelayaa casaan.
Shaashadda xogta ku celiska dhimashada cusub
Markaad ciyaareyso ciyaarta ku celiska dhimashada, waxaad hadda arki kartaa xoogaa macluumaad dadweynaha ah oo ku saabsan ciyaaryahanka kaa tirtiray.
Xogta, hadda waxaa suurtagal ah in la arko xog la xiriirta saxsanaanta toogashada, oo ay ku jiraan inta jeer ee laacibku ku dhuftey qofka ka soo horjeeda, iyo sidoo kale inta jeer ee qofka ka soo horjeedaa uu ku dhuftey ciyaaryahanka.
Waxqabadka warbixin ayaa lagu daray.
Ku celiska dhimashada waa la awoodsiin karaa ama lagu naafayn karaa Dejinta.
Dejinta Qoryaha Qaaska ah
Ciyaartoydu waxay u habeyn karaan qalab kasta oo qoryo ah oo ay u dejin karaan qalabyo kala duwan oo bartilmaameed ah meelo kala duwan.
Marka dejinta la qaabeeyo, dabeecadda ayaa si otomaatig ah u soo ururin doonta una qalabeyn doonta qalabkan markii uu helo.
Qalabaynta khaaska ah ee hubka
Ciyaartoydu waxay u habeyn karaan goobaha xasaasiga u ah qoryaha kasta, kaas oo lagu dabaqi doono marka la isticmaalayo qoryaha u dhigma.
Ogeysiisyada kaqeybgalka ee asxaabta cusub
Markuu saaxiibkiis dagaal ku jiro oo uu waxyeello gaarsiiyo, ogeysiis ayaa ka soo muuqan doona baarka caafimaadka ee saaxiibkiis si loo muujiyo inay dagaal ku jiraan.
Marxaladda 'Royale Pass' markan waxay ku socotaa isbeddel weyn, maadaama ay jiri doonaan laba dhammaan balastarka. Kuwani waa:
Royale Pass bishii koowaad: Tek Era (Luulyo 14 illaa Ogosto 12)
Royale Pass bishii koowaad: Mashruuca T (Ogosto 13 illaa Sebtember 13)
Ka dib markii RP S19 dhammaado, Royale Pass waxaa lagu hagaajin doonaa bisha Royale Pass, ciyaartoyduna waxay dalban karaan hadiyad gaar ah oo soo dhaweyn ah ka dib markay helaan markii ugu horreysay.
Dejinta waqtiga: Lagu hagaajiyay muddada RP illaa hal bil, iyo 2 RP ayaa la sii deyn doonaa midba midka kale ka dib qayb kasta. RP M1 iyo RP M2 ayaa lagu sii deyn doonaa qaabkan.
Isbedelka qiimaha: Lagu hagaajiyay qiimaha caadiga ah ee RP illaa 360 CU iyo qiimaha Elite RP illaa 960 CU (1200 dhibcood gunno).
Yaraynta Range: hagaajiyay heerka ugu sarreeya ee 50 iyada oo aan la beddelin tayada abaalmarinta. Gaadho Darajada 50 si aad u hesho Khuraafaad Khuraafaad ah oo aad u hesho Qoryo Halyeey ah iyo Saldhig 1aad ah.
Abaalmarino dheeri ah: Ciyaartoydu waxay kasban karaan abaalmarin bilaash ah illaa iyo inta ay kasbanayaan darajooyinka RP.
Dejinta Howlgalka: Hoosudhaca mudada howlaha RP caqabadaha 8 todobaad ilaa 4 todobaad, yaraynta shuruudaha waqtiga ciyaarta RP isla waqtigaas.
Waxyaabaha kale ee isbeddelka ah: Waxaa lagu hagaajiyay qiimaha shatiga EZ Mission, oo lagu daray tabelaha bisha Royale Pass, iwm.
Soo Bandhigida Dagaal Qabiil, waa qaab ay qabaa'il isku nooc ah iyo heer waxqabad ku wada dagaallamayaan dagaal 14 maalmood ah.
Xubnaha Qabiilku waxay dhameystiri karaan Ergooyinka Dagaal Beeleedka si ay u helaan Qodobbo Naxdin leh iyo abaalmarin saldhig maalinle ah.
Kahor inta aysan munaasabaddu dhammaan, qabiilka ugu abaalmarinta badan ayaa ku guuleysta dagaal beeleedka xilligan.
Guusha qabiilka iyo tabarucaadka shaqsiyeedba waxay soo saaraan abaalmarinno qurux badan.
Ray waa halkan!
Muuqaal cusub, Ray wuxuu halkan u joogaa inuu kugu cusboonaysiiyo waxyaabaha muhiimka ah oo dhan.
Mawduuca cusub: Araggu waa aamminsan yahay (mid gaar ah), oo lagu heli karo kaqeybgalka Howlgalka Aqoonsiga iyo buuxinta shuruudaha gaaritaanka laga bilaabo Julaay 6 ilaa Sebtember 6.
Guul cusub: Halyeeygii Xilliga ahaa (mid gaar ah), ayaa la heli karaa ka hor Sebtember 13 halka uu halkaa marayo markii xilligii Royale Pass isbeddel lagu sameeyo.
Guul cusub: Adkeysi, taas oo lagu kasban karo kaqeybgalka Tartanka Toddobaadka ee Dhammaan Kartida.
Guul cusub: Lama adkeysan karo, taas oo lagu kasban karo helitaanka ixtiraamka RP ee ciyaarta.
Guul cusub: Khatar ah, oo lagu heli karo dhameystirka ciyaarta iyo qiimeynta saaxiibkiis.
Guul U Dejiso Xiddigaha iyo Neon Punk ayaa soo laaban doona wakhti xaddidan, oo weligiis dambe laga saari doono.
Cusub RP Perk: kartida lagu muujiyo ixtiraamka ciyaarta. Ciyaartoydu way ixtiraami karaan saaxiibkood waqti kasta oo ay ciyaarayaan, fariinta xushmadda ahna waxaa lagu soo bandhigi doonaa taariikhda wada sheekaysiga.
Ciyaartoyda helay ixtiraam waxay kasban karaan qadar cayiman dhibcaha RP.
Horumarinta waxqabadka aasaasiga ah
Taageerada iyo kobcinta IBL si loo siiyo saameyn wax ku ool ah oo iftiiminta khariidadaha isla markaana loo wanaajiyo kala sooca u dhexeeya qaababka.
Taageerada kala firidhka iftiinka cirka, oo ay ku jiraan kala firidhida Rayleigh, Kala firdhinta Mie, ceeryaanta jawiga iyo saamaynta kale, si cirka looga dhigo mid hufan oo macquul ah
Taageero loogu talagalay saameynta cagaaran ee hodanka ah, daruuraha firfircoon, saamaynta nalalka daruuriga ah ee la ekaysiiyey, iwm.
Hagaajinta aagga amniga
Tencent waxay ku dartay waxyaabaha ka xiisaha badan dhacdooyinka iyo abaalmarinta weyn Aagga Amniga - Dib-u-eegista Fiidiyowga, iyo sidoo kale sii wanaajinta hannaanka dib-u-eegista fiidiyowga iyo khibradda hawlgalka.
Lagu daray shaashadda dhacdada si ay ugu fududaato daalacashada waxyaabaha dhacdada.
Dhacdo qorista: Abaalmarinno qaas ah ayaa la soo ururin karaa marka ay jiraan tiro cayiman oo dib u eegista fiidiyowga ah.
Ergooyinka Dib U Eegista Maalinlaha: muraajiceeyayaasha fiidiyowga waxay furi karaan hawlgallo kormeer taxane ah waxayna uruurin karaan abaalmarinno.
Abaalmarinno joogto ah oo dheeri ah, sida dharka joogtada ah, jaantusyada avatar, iwm, ayaa lagu daray si loogu dhiirrigeliyo loona taageero ciyaartoydu inay u sii wadaan la dagaallanka khiyaanooyinka iyo khiyaanooyinka.
Kordhin istiraatiijiyadeed oo dheeri ah si loo bartilmaameedsado ciribtirka cawska, iscelin la'aanta, aragtida raajada, ujeeddada gawaarida, iyo xawaaraha dardargelinta.
Dadaallada la xoojiyay si looga hortago burburka ilaha kala duwan.
Sii wad inaad xoojiso difaacaaga kahortaga weerarada shabakadaha kaladuwan.
Kordhinta horyaalnimada dhammaan awoodaha
Darajooyinka guud ee gobolada
Qiimeynta gobalada cusub ee la soo kordhiyay ayaa ka madax banaan qiimeynta Horyaalada All-Talent.
Ciyaartoyda ka qeyb gala ugu yaraan 1 ciyaar toddobaad kasta waxaa lagu kala saari doonaa gobolkooda usbuucaas.
Kooxuhu waxay gali doonaan aag-boodhadh goboleed ka dib markay dhameeyaan ciyaar. Qiimeynta Gobol walba waa ka madax banaan yahay midba midka kale.
Ka dib Ciyaaraha Toddobaadka dhammaado toddobaad kasta, ciyaartooydu waxay ururin karaan abaalmarinno qiimeyn ah oo ku saleysan kooxdooda darajada ay ka geysato gobolkooda usbuucaas.
Ciyaartoydu waxay dalban karaan abaalmarin ciyaar firfircoon oo ku saleysan tirada kulamada ay ciyaaraan Toddobaadyada Toddobaad kasta.
Xogta qiimeynta cayaaraha usbuuclaha ah iyo abaalmarinta u-qalmitaanka waa la cusbooneysiiyaa toddobaadle.
Cinwaano cusub iyo guulo ayaa lagu soo kordhiyay Horyaalka Dhamaan-hibooyinka.
Horumarinta calaamadeynta Universal
Si yar ayuu u hagaajiyay isteerinka giraangirta. Isteerinka iyo qaabeynta ayaa wali isku mid ah shaag dhawaaqa.
Ku guuleysiga daqiiqadaha
La hagaajiyay waqtiga ciyaartoydu ay dagaalka ku sii jiri karaan ka dib markay guuleystaan ​​ilaa 60 ilbiriqsi.
Dejinta UI Dagaal
La hagaajiyay qaabka hoose ee badhanka badhanka shaqada. Isbedelo yar ayaa lagu sameeyay qaabeynta asalka ah ee Dejinta, Codka, Graffiti, iyo badhanka Emote.
Sanduuqa Dhimashada wuxuu muujiyaa hagaajinta caqliga
Marka ciyaartooydu ururiyaan sanduuqa dhimashada ee ciyaaryahan kale, ka dib markii shaxda afar-geesoodka ah iyo qaabka sagaal-jibaaran ee sanduuqa la beddelo, tan waa la xusuusan doonaa si aysan ugu baahnayn in mar kale la beddelo.
Horumarinta qalabka 'gyroscope'
Ciyaartoydu hadda way u habeyn karaan xasaasiyadda gyroscope markay bartilmaameedsanayaan hubka.
Lagu darray badal si loo isticmaalo u jeesashada gyroscope. Mar alla markii qalabkani awood u yeesho wuxuu u rogi doonaa kor / hoos 'gyro'.
90 FPS hadda waxaa lagu heli karaa qaab muuqaal ah oo fudud oo loogu talagalay aaladaha cusub qaarkood.
Hagaajinta banner lobby
Calanka ku yaal geeska midig ee kore ee Lobby-ka ayaa hadda ku rogrogmi kara xawaare kala duwan cusbooneysiinta cusub ee 1.5.
Abaalmarinta hagaajinta shaashadda
Shaashadda abaalmarinta laguu soo bandhigo ayaa la hagaajiyay. Saamaynta badhanka badhanka ayaa lagu daray si looga hortago isticmaalayaasha inay si dhakhso leh u garaacaan oo si qalad ah uga boodaan shaashadda.
Sahaminta dagaalka ayaa la hagaajiyay. Ciyaartoydu hadda waxay siin karaan qiimeyn, waxay dooran karaan astaamo, waxayna siin karaan jawaab celin kulanka saaxiibadood.
Ku habeynta macluumaadka shaashadda weyn
Ciyaartoyda qaar dhib ayey ku qabeen fahamka shaashadda kooxda shaashadda ugu weyn maxaa yeelay muu muujin macluumaadka si macquul ah. Tan hadda waa la hagaajiyay.
Gelitaanka howlaha Vehicle iyo X-Suit waa la hagaajiyay.
Ciyaarta jecel jecel
Waxyaabaha aad jeceshahay bilowga ciyaarta ama marka aad guuleysato waxay muujineysaa horumarka Likes-ka kooxda iyo saameynta gaarka ah ee Likes-ka.
Wareegga 1 Xilliga 1
Nidaamka dhibcaha dhibku waa xeerar kale oo loo isticmaalo in lagu qiimeeyo ficillada ciyaartoyga ee kulammada iyadoo aan la beddelin sharciyadii dhibcaha ee asalka ahaa.
Hel dhibco tartame gunno ah haddii aadan ciyaarta ka bixin, lumin ama ka takhalusin asxaabtaada kulan buuxa.
Haddii ciyaartooyda laga badiyo kulan inta ay leeyihiin Dhibcaha, waxay si toos ah u lumin doonaan dhibcaha iyadoo lagu saleynayo heerkooda.
Dhibco dheeri ah oo tartan ah ayaa la siiyaa si loo dhameystiro ciyaarta koowaad ee maalin kasta.
Dhibcaha Challenge lama ururin karo marka qadarka ugu badan la gaaro.
Dhibcaha Challenge waxaa loo tiriyaa si gooni ah iyadoo ku xiran serverka iyo qaabka ciyaarta.
Qodobbada Culeysku kama wareegi doonaan xilliyada kale.
Hagaajinta astaanta heerka
Bandhigga astaamaha heerka ayaa la cusbooneysiiyay si loo kobciyo faahfaahintooda.
Waxay hagaajinaysaa saamaynta casriyaynta heerka.
Cusbooneysiinta shaashadda xilliyeed
Soo bandhigida macluumaadka shaashadda Xilliga waa la hagaajiyay.
Khadadka kobaca abaalmarinta iyo horumarka saaxiibtinimada ayaa lagu daray.
Lagu hagaajiyay habka abaalmarinta loo soo bandhigo.
Shaashadda faahfaahinta abaalmarinta waa la cusbooneysiiyay
Horumarinta abaalmarinta xilliyeed
Abaalmarinta heerka qalinka ee lagu daray cusboonaysiinta.
Abaal marinno lagu daray heerka Ace kadib markii loo qaybiyey heerka.
Kordhiyay qadarka abaalmarinta heerarka yaryar.
U kala-dhig heerka Ace heerar gaar ah.
Abaalmarinno lagu daray iyo xulasho wadaagid loogu talagalay heerarka loo qaybiyay ee heerka Ace.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Dhamaan wararka PUBG Mobile cusbooneysiiya 1.5 ayaa keena
6-da codsi ee ugufiican ee loogu duwo maqalka qoraalka
6-da kulan ee ugu fiican ping pong ee Android